Raha ho an’io OPHAM io manokana dia fanafody 20 tapitrisa boaty no notsinjaraina nanerana ny nosy tamin’ny taona 2018 teo. Nandritra izany fitokanana izany dia nilaza ihany koa ny minisitra fa dingana tsy maintsy tratrarina ny hahatonga ireo fanafody ara-potoana sy azao antoka eny anivon’ny vahoaka sy ireo toeram-pitsaboana. Nanamafy ihany koa ny tenany fa mifameno ny asa fitsinjarana fanafody na ny eo amin’ny fanjakana sy tsy miankina na ny eo amin’ireo samy tsy miankina. Ny Fanafody hoy izy no mamonjy aina nefa io ihany koa mety no mety hamono raha tsy manaraka ireo fenitra rehetra amin’ny fitahirizana sy fitsinjarana azy. Izany rahateo no antony nananganana ity toeram-pitsinjarana fanafody lehibe ity satria mahatratra hatrany amin’ny 6.000m². Voaloahany eto amin’ny ranomasimbe Indiana manaraka ny fenitra ISO 9001 2015 ary ampy tsara ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana.